ငွေ အလိမ်ခံရတဲ့အပြင် အောက်လမ်းနည်းနဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ခံခဲ့ရပုံတွေကို ပြောပြလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း – Shwe Likes
ငွေ အလိမ်ခံရတဲ့အပြင် အောက်လမ်းနည်းနဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ခံခဲ့ရပုံတွေကို ပြောပြလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
Shwe | March 29, 2022 | Celebrity | No Comments
ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက ဗီဒီယိုဇာတ် ကားေ လးတွေကနေ ပရိသတ် အားပေး မှုတွေယေ န့ထိရထားတာ ကတော့ သိဂီထွန်း ပဲဖြစ်ပါတ ယ်။ သူကတော့ ယခုချိန်ထိ တိုင် MRTV-4 ဇာတ်လမ်း တွဲလေးတွေတို င်းမှာပါဝင် သရုပ်ဆောင်ေ နရတုန်းဖြ စ်ပါတယ်။
ယနေ့ထိလည်း သူမကိုချစ်ခ င်အားပေးနြေ ကတုန်းဖြစ် ပါတယ်။သူမ ကတော့ အနုပညာအ လုပ်တွေအပြင် အပြင်စီး ပွားရေးအလုပ်ေ တွပါလုပ် ကိုင်နေ တာပါ။ ဟိုတလောကလ ည်း သူဟာပိုက်ဆံလိမ်ခံလိုက် ရသေးတာဖြစ်ပြီးခု မှာတော့ သူခံစားရတာေ တွကို လူမှုကွ န်ရက်ကေ နရေးသားထားခဲ့တာပါ။
အရင်နေ့ကေ ရွှတိဂုံဘုရားမှာဆုေ တာင်းခဲ့တဲ့ အတိုင်းဒီနေ့မန က်လေးခွဲ ကတည်းကဗို လ်တစ်ေ ထာင်ဘုရားနဲ့ေ ရွှဘုန်းပွင့်ဘုရားသွား ပြီးလူန တ်သတ္တဝါရရက် သားသမီးေ ကာင်းသူမကော င်းသူအားလုံးအေးချမ်း သာယာပါစေ လိုဆုတော င်းပေးရသောကု သိုလ်တ ရားကြောင့်.ကျမ အာမခံပေးလို့သူများကိုလျော်ေ ပးလိုက်ရေ သာငွေသိန်းနှစ်ထော င်ကျော်ပြန်မ ရတဲ့အပြင်ငွေေ တာင်းပါ ကfb တင်ပါက.
အင်တာဗျူးဖြေပါက ..ဘုရားမှာယတြာချေပါက .,သူတို့ရဲ့လု ပ်ရပ်ကကျမ၏အသ က်ကိုထိခိုက်ရမည့်အေြ ခနေသို့ရော က်ရှိနေခြင်း မှက င်းဝေးရပါစေ လို၏ဘုရား။တ စ်ခါကလဲကျမေ သဘေးမှလွှတ် လာရပါ တယ်.
.ပေးနိုင်တဲ့အ ဆင့်ရှိပြီးမပေး ချင်လဲ ယူလိုက်ကြ ပါ။ ကျမချွေးနဲ့ကိုယိစိ တ်ရင်းပြီးရှာခဲ့ရတာ မို့စားကြသောက်ြ ကပါတော့ ကျန်းမာချ မ်းသာပျော် ရွှင်စွာနေကြပါတော့…ကျမဂုဏ်သိက ္ခာကိုငွေနဲ့ဝယ်လိုက်တ ယ်လို့သဘော ထားဖြေလိုက်ပါပြီ
ဆိုပြီးရေးသား ထားခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်ေ တွလည်း အမြဲပရိသ တ်တွေကိုဖျော်ဖြေေ ပးနေတဲ့ သီဂီထွန်းကိုလည်းအာ းပေးစ ကားတွေေြ ပာသွားကြပါဦးနော်။ Credit;
ဟိုတစ္ခ်ိန္တုန္းက ဗီဒီယိုဇာတ္ ကားေ လးေတြကေန ပရိသတ္ အားေပး မႈေတြေယ န႔ထိရထားတာ ကေတာ့ သိဂီထြန္း ပဲျဖစ္ပါတ ယ္။ သူကေတာ့ ယခုခ်ိန္ထိ တိုင္ MRTV-4 ဇာတ္လမ္း တြဲေလးေတြတို င္းမွာပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေ နရတုန္းၿဖ စ္ပါတယ္။
ယေန႔ထိလည္း သူမကိုခ်စ္ခ င္အားေပးေၿန ကတုန္းျဖစ္ ပါတယ္။သူမ ကေတာ့ အႏုပညာအ လုပ္ေတြအျပင္ အျပင္စီး ပြားေရးအလုပ္ေ တြပါလုပ္ ကိုင္ေန တာပါ။ ဟိုတေလာကလ ည္း သူဟာပိုက္ဆံလိမ္ခံလိုက္ ရေသးတာျဖစ္ၿပီးခု မွာေတာ့ သူခံစားရတာေ တြကို လူမႈကြ န္ရက္ေက နေရးသားထားခဲ့တာပါ။
အရင္ေန႔ေက ရႊတိဂုံဘုရားမွာဆုေ တာင္းခဲ့တဲ့ အတိုင္းဒီေန႔မန က္ေလးခြဲ ကတည္းကဗို လ္တစ္ေ ထာင္ဘုရားနဲ႔ေ ရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားသြား ၿပီးလူန တ္သတၱဝါရရက္ သားသမီးေ ကာင္းသူမေကာ င္းသူအားလုံးေအးခ်မ္း သာယာပါေစ လိုဆုေတာ င္းေပးရေသာကု သိုလ္တ ရားေၾကာင့္.က်မ အာမခံေပးလို႔သူမ်ားကိုေလ်ာ္ေ ပးလိုက္ေရ သာေငြသိန္းႏွစ္ေထာ င္ေက်ာ္ျပန္မ ရတဲ့အျပင္ေငြေ တာင္းပါ ကfb တင္ပါက.
အင္တာဗ်ဴးေျဖပါက ..ဘုရားမွာယၾတာေခ်ပါက .,သူတို႔ရဲ့လု ပ္ရပ္ကက်မ၏အသ က္ကိုထိခိုက္ရမည့္ေၾအ ခေနသို႔ေရာ က္ရွိေနျခင္း မွက င္းေဝးရပါေစ လို၏ဘုရား။တ စ္ခါကလဲက်ေမ သေဘးမွလႊတ္ လာရပါ တယ္.
.ေပးနိုင္တဲ့အ ဆင့္ရွိၿပီးမေပး ခ်င္လဲ ယူလိုက္ၾက ပါ။ က်မေခၽြးနဲ႔ကိုယိစိ တ္ရင္းၿပီးရွာခဲ့ရတာ မို႔စားၾကေသာက္ျ ကပါေတာ့ က်န္းမာခ် မ္းသာေပ်ာ္ ရႊင္စြာေနၾကပါေတာ့…က်မဂုဏ္သိက ၡာကိုေငြနဲ႔ဝယ္လိုက္တ ယ္လို႔သေဘာ ထားေျဖလိုက္ပါၿပီ
ဆိုၿပီးေရးသား ထားခဲ့တာပါ။ ပရိသတ္ေ တြလည္း အျမဲပရိသ တ္ေတြကိုေဖ်ာ္ေျဖေ ပးေနတဲ့ သီဂီထြန္းကိုလည္းအာ းေပးစ ကားေတြေျ ပာသြားၾကပါဦးေနာ္။ Credit;
ပြည်သူချစ် မင်းသမီးချောလေး အိန္ဒြာကျော်ဇင် နဲ့ တူလွန်းတယ်ဆိုပြီး လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ အကဆရာမလေး Mဂျာဆိုင်း(ရုပ်သံ)